I-VANDERBILT Igama Igama kunye neMvelaphi
Inzame yeVanderbilt ineemvelaphi ezimbini ezahlukileyo ezahlukileyo:
isibongo sesimo somntu othile ohlala kufuphi nentaba ephantsi, ukusuka kwi-Middle Low German bulte , esithetha "isigundane" okanye "intaba ephantsi."
uqobo uVan de Bylt, ukusuka kwi-Die Byltye, igama leetyikitya elinikezelwa kubakhenkethi baseHolland. Ukusuka kwi-Dutch byltye , oku kuthetha intshontsho okanye i-bill.
Igama Igama: IsiDatshi , isiJamani saseNyakatho
Igama Lenye igama: I-VANDERBILDT, VAN DER BILT, VANDERBUILT
Kuphi kwiWorld igama le-VANDERBILT?
Nangona ivela eNetherlands, igama le-Vanderbilt ngoku lixhaphake kakhulu eUnited States, ngokutsho kwedatha yokusabalalisa igama kwi-Forebears. Nangona kunjalo, kunjalo ngokufanayo eChile nase Columbia. Igama laliqhelekileyo eUnited States ngexesha le-1880 kunokuba ngoku, ngokukodwa kwiindawo zaseNew York naseNew Jersey.
Inombolo yeVanderbilt ngoku ixhaphakile ngokusekelwe kwipesenti kwi-United States yaseAlaska, eAnsansas, eNew Jersey, e-Illinois nase-Connecticut, ngokwe-WorldNames PublicProfiler.
Abantu abaPhezulu abanegama lokugqibela elinguVANDERBILT
UKornelius Vanderbilt - intloko yelizwe laseMelika yaseVanderbilt; waba ngumntu ocebile kakhulu eMelika phakathi nekhulu le-19 leminyaka ngokuthunyelwa kwakhe kunye neendlela zoololiwe
U-Amy Vanderbilt - igunya laseMerika kwi-label
UGloria Vanderbilt - umculi waseMerika, umlobi, umdlali we-actress, kunye ne-heiress, eyaziwayo ngomgca we-designer blue jeans ukususela kuma-1970 kunye nama-80.
UGeorge Washington Vanderbilt, ilungu le- II lentsapho yaseVanderbilt evelele eyathumela ukwakhiwa kweBiltmore phakathi kwe-1889 no-1895; Igama lelifa elivela kwi "Bildt," imvelaphi yookhokho bakhe baseVanderbilt eHolland.
I-Famous VANDERBILT Family
Umbuso ovelele waseMelika waseVanderbilt waqala noKornelius "Commodore" uVanderbilt, owazalelwa eStenen Island ngo-1794.
Umkhulu wakhe oneminyaka engama-3, uJan Aertszoon (1620-1705), umlimi waseDutch ovela kwidolophana yaseDe Bilt eUtrecht, eNetherlands, wayekhokho ovela kwelinye ilizwe, efika kwi-Dutch Colony yaseNew Netherland njengomkhonzi ongenamsebenzi ngo-1650.
Xa wayeneminyaka elishumi elinesibhozo, uKorneliyasi, owesine wabantwana abasithoba, waqiniseka ukuba abazali bakhe bamboleke imali engama-dollar eyi-100 ukuze athenge ikhephe ukuze aqale inkonzo yakhe yokuhamba kunye neenqwelo phakathi kweStenen Island neNew York City, inkonzo ekugqibeleni yaziwa ngokuba Ferry eyaziwayo yaseStenen Island. Umncinci uKorneli wayesayinela njengomfundi kwiintlobo ezininzi zeenqanawa ukuze aqonde zonke iinkalo zoshishino lokuhlala. Xa wayeneminyaka engama-50, ubukhosi bakhe bokuthumela babenelungelo lokumnika i-millioneire status. Emva koko waphendukela ekuthengeni umzila wesitimela omncinci waza wajika waba yimisebenzi enenzuzo. Ngethuba lokufa kwakhe ngo-1877, uCornelius Vanderbilt wayefanele u-$ 105 wezigidi.
UAnderson Cooper, unyana kaGloria Laura Vanderbilt, okwangoku kuphela owaziwayo, osebenzayo ozala kwikhaya elidumile laseVanderbilt.
Izibonelelo zoGenesalogy for the Name VANDERBILT
I-Vanderbilt Family Genealogy: Intshisekelo yam ngeento zonke iVanderbilt
UTaneya Koonce, owathandana nentsapho yaseVanderbilt emva kokutyelela i-Biltmore estate okokuqala, uye wakha umthi wentsapho epheleleyo kwintsapho yaseVanderbilt, kwaye udibanisa nezinye izibonelelo zakwaVanderbilt.
Ukufumana iinjongo zakho: Anderson Cooper's Family Interactive Tree
Umboniso we-PBS wozalwane, Ukufumana iinjongo zakho , ulandela ilifa elifa lincinane leNzalo kaVanderbilt noAnderson Cooper-nguyise, uWinatt Emory Cooper.
Amagama amaninzi aqhelekileyo aseDutch kunye neentsingiselo zawo
De Jong, Jansen, De Vries ... Ngaba ungowesinye sezigidi zabantu abathile baseDatshi bezemidlalo elinye lala magama aphezulu aphezulu aphuma eNetherlands?
I-Cander Family Crest - Akusikho Oko Ucingayo
Ngokuchasene noko ungayiva, akukho nto enjengekhaya laseVanderbilt okanye ingubo yeengalo kwi-renta yeVanderbilt. Iingubo zeengalo zinikwe abantu ngabanye, kungekhona iintsapho, kwaye zingasetyenziselwa ukusetyenziswa kuphela ngabantu abangenakuphazanyiswa inzala yomntu oye wanikwa ingubo yeengalo.
I-FamilySearch - VANDERBILT Genealogy
Hlola iirekhodi ezingaphezulu kwama-400,000 kunye nemithi yentsapho edibeneyo yomgca eposelwe i-Vanderbilt nomnxeba kunye nendawo eyahlukileyo kwiWebhsayithi ye-FamilySearch, ebanjwe yiCawa likaYesu Kristu we-Saints-Day Saints.
I-VANDERBILT Igama lomnxeba kunye neeNcwadi zoLondolozo lwentsapho
I-RootsWeb ibamba amanqaku amaninzi angabhalwa ngabangcwaningi be-Vanderbilt.
DistantCousin.com - VANDERBILT Imvelaphi Yokuzalwa Yomntwana & Imbali Yentsapho
Hlola ii-database zolwazi zamahhala kunye neefayili zodidi lwegama lokugqibela igama elithi Vanderbilt.
Genealogy and Family Tree Page
Dlulisa amehlo kwiirekhodi zomnxeba kunye neenkcukacha ezibhalwe kwizahlulo zemveli kunye neembali zabantu ngabanye abanegama elidumileyo igama elinguVanderbilt elivela kwiwebhusayithi yeGenesalogy Today.
I-HUSSAIN Igama lomxholo kunye neNtsapho yeMbali
I-OBAMA - Igama lokugqibela elibizayo kunye nomvelaphi
I-BRUNO Igama lomnqophiso kunye neNtsapho yeMbali
Igama leWilson Igama kunye Nemvelaphi
I-SMITH - Yisho igama kunye nomvelaphi
Ukubilisa isichazi kwiKhemistry
U-Pablo Neruda, Iingqungquthela zabantu zaseChile
Yamkela, ngaphandle, kwaye ulindele
Indlela yokuKhula ukuKhanya kweMbala
Gcina abaFundi kwiindlela zabo zokuziphatha ezihle kakhulu ngeeComputer Management Tips
Gandhi Top Quotes
IziFomelo zeNtsholongwane eziNzululwazi: Indlela yokuziFometha
Iingqungquthela, i-Order Blattodea
Isocolon: UMthetho wokuLinganisa kweRhetorical
Imbali yeSouth Rap
Indlela yokudweba i-Metallic and Shiny Surfaces kwi-Oyili ne-Acrylic
I-Azusa Pacific University Admissions
I-Ayn Rand: I-Sociopath Ngubani Owamkela Umbulali Obulalayo?
Ngaba iScuba Diving With Sharks Ingozi?